FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ESPANIOLA TIBETANA - ALIKA
Tara Spaniel Tibetana amin'ny 12 volana
Lisitry ny alika mitambatra Espaniel Tibetana
Ny Espaniôla Tibetana dia matetika no diso amin'ny Pekingese, ny mahasamihafa azy dia manana palitao tsy dia be loatra ny Espaniôla Tibetana, somary lava kokoa ny tarehiny ary tsy manana hoditra fanampiny manodidina ny masony. Somary lava kokoa noho ny hahavony ny vatana. Ny loha somary misy loha dia kely raha oharina amin'ny vatana. Ny molotra marefo dia lava halava tsy misy ketrona, ary misy fijanonana kely nefa voafaritra. Mainty ny orona. Misaraka tsara ny maso mainty volontsôkôlà, miendrika boribory lavalava ary salasalany ny habeny. Ny nifina dia tokony hihaona amin'ny sary ambany na manaikitra. Somary miondrika ny tongony eo aloha ary sahala ny volon-tongotra. Esorina indraindray ny demclaws. Ny rambony volom-borona tsara dia apetraka avo ary entina any ambadika. Ny palitao roa Silky dia mivalampatra, fohy sy malama eo amin'ny tarehy sy eo alohan'ny tongotra ary amin'ny halavany eo amin'ny vatana. Ny vozona dia rakotry ny volom-bolo izay malaza kokoa amin'ny lahy. Misy volom-borona eo anelanelan'ny rantsantongony izay mihantona matetika eo ambonin'ny tongotra. Ny palitao dia avy amin'ny loko rehetra, matevina, maro loko na misy alokaloka, ao anatin'izany ny volondavenona, mena, volamena, crème, fotsy, mainty sy mainty ary mainty, matetika misy marika fotsy amin'ny tongotra.
Ny Espaniôla Tibetana dia falifaly, falifaly, manintona, hendry ary matoky. Ity karazany ity dia mpiara-miasa tsara amin'ny fianakaviana, mahaleo tena sy mpitily tsara. Tsy faly izy io fa mbola hirongatra ihany mpiditra an-tsokosoko ary tabataba hafahafa. Afaka mihetsika haingana izy io. Mifanaraka ity karazana ity alika SY biby hafa . Mety ho Spaniels Tibetana somary sarotra ny mampiofana . Raha avelanao hisy ity alika ity mpitarika fonosana ny olona , mety ho lasa tsy mahomby loatra izy, mety tsy azo atokisana amin'ny ankizy ary natokana ho an'ny olon-tsy fantatra. Mety ho lasa maditra izy indraindray ary mahery setra indraindray. Tsy toetra Spaniel Tibetana ireo, fa inona no fantatra amin'ny anarana hoe Syndrome kely alika , entanin'ny olombelona fihetsika , izay inoan'ilay alika fa ilay lehiben'ny trano . Raha vantany vao esorin'ny olombelona ny alika, dia hihena ny fihetsika.
Haavony: 10 santimetatra (51cm)
Lanja: 9 - 15 pounds (4.1 - 6.8 kg)
Mora voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana sy hafanana.
Ny Espaniôla Tibetana dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Tsy dia mihetsika intsony izy io ao an-trano ary handeha tsara raha tsy misy tokotany.
Ny Espaniôla Tibetana dia mitaky fanatanjahan-tena antonony, izay misy tsara isan'andro mandeha lavitra . Izy io koa dia hankafy romp ao an-tokotany.
pitbull mpanao ady totohondry alika kely Mix sary
Ankizy kely 3 ka hatramin'ny 6. Tsy toy ny ankamaroan'ny karazany hafa, ny tohodrano Spaniel Tibetana dia mirona hidina amin'ny hafanana indray mandeha isan-taona fotsiny.
Sasao sy kosohy tsy tapaka ny palitao. Na dia mpandroaka salantsalany aza ity karazany ity mandritra ny taona, dia mivoaka miaraka amin'ny sampahony indray mandeha isan-taona ny palitao.
retriever volamena sy ny poodle hazo fijaliana
Avy any Tibet ity karazana ity. Avy amin'ny alika avy any Shina sy ny firenena bodista hafa izy io. Ny Spaniel Tibetana dia heverina ho karazana taloha, satria misy porofo ny fisiany 2000 taona lasa izay. Ny ankamaroan'ny alika kely aziatika dia inoana fa avy amin'ny Tibbie. Tena hajaina any Tibet fahiny, matetika izy ireo dia notolorana fanomezana ho an'ny tranon'ny mpanjaka ary niparitaka nanerana an'i Azia ireo alika. Ny sarin'ny alika dia hita tamin'ny zavakanto tatsinanana tany am-piandohana hatramin'ny 1100 BC. Ireo alika dia niasa nanodina ny kodiarana vavaka ho an'ny tompony ary koa toy ny mpiambina amin'ny monastera Tibetana. Nipetraka teo amin'ny rindrina avo izy ireo ary nibolisatra amin'izay zavatra inoany fa tsy an'ny tenany. Ny karazany dia nampidirina voalohany tany Angletera tamin'ny faramparan'ny taona 1800. Neken'ny AKC izany tamin'ny 1983.
Starlite's Ted-E-Bear aka Teddy the Tibet Spaniel, sary natolotr'i Tibbies-R-Us
Xena Spaniel Tibetana, sary natolotr'i Tibbies-R-Us
Teddy sy Xena Espaniola Tibetana, sary natolotr'i Tibbies-R-Us
'Spaniel Tibetako ity. Jeff no anarany ary vao avy nankalaza ny tsingerintaona faha-12 taonany izy tamin'ny 18 desambra. Tiany ny saina ary mifampikasokasoka, nefa tsy tia halaina na hotanana akaiky loatra, angamba noho izy Syndrome kely alika . Tiany ny milalao alika hafa ary mahita ny tenany mivoaka ny tokotanin'ny fefy mankany mandehana amin'ny arabe ary tsidiho ny mpiara-monina rehetra, izay mankafy azy tanteraka. Tena manan-tsaina izy. Hainy ny manao mipetraha, mijanona , Hanketo , mihirà (ary manandrama mampifanaraka ny feon'ny piano), ary fantany koa ny fomba hialana amin'ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny fanomezana anao mason'alika alika alika kely izay an-dohany. Matoky tena be amin'ny alika maro be izy ary manandrana manomboka ady amin'ny alika mpiara-monina amin'ny alàlan'ny fametahana ny lohany amin'ny fefy mba hivoahana amin'izy ireo. Matahotra ny karazana tabataba sy afomanga ary varatra anefa izy. Tsy masiaka amin'ny olona (tia zazakely) na alika hafa izy, fa tiany kosa ny manenjika bitro sy vorona dia mamono azy… indraindray eo imason'ny olona. Raha fintinina dia tsy hatakaloko alika hafa ny Jeff-ko !!! '
Jeff Spaniel Tibetana 12 taona
'Zoe dia Tibetana salama sy miasa 15 taona. Izy mandeha an-tongotra roa kilaometatra isan'andro . Miambina hatrany amin'ny varavarankely mandritra ny adiny roa isan'andro. Mihinana tsara, matory tsara. Biby fiompy mahafinaritra ao an-tranonay any Cork, Irlanda, nanomboka tamin'ny 1995. Fanomezana avy amin'ny zanako vavy Niamh sy Eimear fony voan'ny aretim-po aho tamin'ny 1995. Misaotra, Zoe.
'Zoe dia 17 taona izao. Tena mahantra izao ny fandrenesany fa raha tsy izany dia salama tsara izy. Mandeha eo amin'ny iray kilaometatra isan'andro , misakafo tsara ary matory be. Ny palitaony dia tsara toy ny taloha, fisty izy ary tsara maso. Manantena izahay fa hankafy ny orinasany mandritra ny fotoana fohy. Raha mba ho antitra koa aho !! '
Zoe the Tibet Spaniel, 17 taona - “Ny namanay sy namanay mahatoky nandritra ny 17 taona dia nodimandry am-pilaminana ny alakamisy 29 jona 2012. Malahelo azy fatratra izahay. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Espaniel Tibetana
Tibetan Spaniel Sary 1
airedale terrier volamena retriever mifangaro
ny rambon'ny saka dia niolaka tany aoriana
boston terrier mifangaro amin'ny jack russell